महिलाको कुन अंगमा छुदा सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् ? लिनुहोस् टिप्स ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
महिलाको कुन अंगमा छुदा सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् ? लिनुहोस् टिप्स ?
प्रकाशित मिति २६ बैशाख २०७५, बुधबार १५:३४ लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं।यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् र हुदै छन्। पनी , ती अध्ययनहरुबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । लागी रहेको पनी छन् । केही महिना अगाडि गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि सहमतीमा ल्याउने बारेमा पत्ता लागेको छ ।
सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना बढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा फोर प्ले गर्ने गर्नु पर्छ । यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनै पनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगार र सयुक्त ठट्टालाई पनि प्राक्कक्रिडा भनिन्छ ।
प्राकक्रिडामा संलग्न हुदा एक अर्काको शरीर, उसका संवेदनशिल अंगका बारेमा थाहा हुने मात्र होइन, दम्पती बीच एक आपसमा कुराकानी हुने र एक अर्कालाई राम्ररी वुझ्ने अवसर पनि मिल्छ । आपसी समझदारी बढाउन मद्दत मिल्छ ।
बिम्स्टेक सम्मेलनको कारण अर्को साताको तीन दिनसवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने
काठमाडौँ। बिम्स्टेक सम्मेलनका कारण काठमाडौँका सबै सवारी साधनमा अर्को हप्ता तीन दिन जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ ।
बैठक अपराह्न ४ बजे बालुवाटारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले…
स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष घोषणापत्र भुल्दै दलहरू
काठमाडौं । मुलुकले स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार पाएको सोमबार (आज) एक वर्ष पुगेकोे छ । स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै…
प्रधानमन्त्री अोलीद्वारा नेपाल–चीनमैत्री दौडको उद्घाटन
काठमाडाैँ । चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा छदिने चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण दौड प्रतियोगिताको…
स्थानीय तहमा लुट: जनप्रतिनिधिको दैनिक भत्ता १५ हजारसम्म, घरको भान्सेलाई पनि तलव
काठमाडौं । लेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलो पटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दैछ जसमा अथाह अनियमितता देखिएको छ ।
गत वर्ष ६…
बेइजिङ । दुई कोरियाका बीचमा पुस २५ गते मंगलबार उच्चस्तरीय वार्ता…